DHAGEYSO :MALAQ DEEROW OO BEENIYAY IN XILKA LAGA QAADAY,, | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	DHAGEYSO :MALAQ DEEROW OO BEENIYAY IN XILKA LAGA QAADAY,,
DHAGEYSO :MALAQ DEEROW OO BEENIYAY IN XILKA LAGA QAADAY,,
written by warsan radio 20/08/2015
malaaq deerow malaaq yacquub oo kahadlay xilka qaadis lagu sameeyay.
iyadoo maalmihii ugu danbeeyay ay warbaahinta qaar ay sheegayeen in xilka qaadis lagu sameeyay malaaq deerow malaaq yacquub oo ahaa afayeenka odoyaasha kuufur galbeed soomaaliyaa ayaa waxaa uu kadlay xilkaqaadistiisa waxaa uu sheegay in uu san oqeyn meesha xilka loogu qaaday waxaana uu tilmaamay in ay jiraan dad doonaaya in beenta iska sheegaan iyaga oo aan wax ka ogeyn meesha xilka leeyga qaaday.
wareysi gaar ah uu siiyay warbaahinta koofur galbeed soomaaliya ayaa waxaa uu ku sheegay in aytahay wax laga xumaado in dadka qaar ay sheegeen xil kaqaadis been ah.
mar uu ka hadlay xilka qaadistiisa ayaa waxaa uu sheegay in uu san maqlin labaqolo oo meel iskuutimid oo wax dooratay waxaana uu sheegay in uu dadkiisa u dhax jiro oo uu dhaawaane ka yamid muqdisho.
sidoo kale waxaa uu ka hadlay doorashada ay doorteen beesha boqol hore oo ah afar beel ah ayaa uu riyi” waa wax layaab leh oo ay ceeb ku tahay qabaa’ ilada afartaa beelood manaa soo marin waligeed ayuu sii raaciyay hadalkiisa malaaq deerow malaaq yacquub oo u waramay warbaahinta koofur galbeed ee soomaaliya .
waxaana uu yiri’dhaqankoodane waa soo jireen ninwalibane malaaqiisa ayuu lalaa nin siyaadada meel ay gasoogalaana wayaay ayaa soo dhoodhobay mana aha wax jira ayuu sii raaciyay malaaq deerow malaaq yacquub oo kusugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay.
waxaana ay dhibkutahay buu yiri in qabiilka waxaana dhibaato u geysaneysaa jirataankii umad jirta oo dagan deegaano mana suura galeyso meesha mahan midoowgii suufiyiti ma ahan oo dad leysu aruurinaayo ayuu siiraaciyay malaaq deerow malaaq yacquub.
waxaanaa si dookale uu sheegay in aysan jirin xilkaqaadis lagu sameeyay nin warqad iska soo qortay ayaa wata mana aha in oday dhaqmeed dadkiisii ku dhaxjiro lagu mashquulana mahaan.
waxaa uu sheegay in warbaahinta qaar ay sheegaan warar been ah loona baahanyahay in arimahaaas ay iska dhaafaan warbaahinta qaar ee wararka been abuurka ah faafiya.
waxaana uu baaq u soo jeediyay shacabka kuufur galbeed ee soomaaliya in garbaha is qabasdaan dadka doonaaya in oday dhaqameed dadka dhaxdooda xushmad kuleh laga been sheegin oo qofkastane uu u soo jeesto si dii dalka loo hormalin lahaa.
waxaan uu sheegay in ay wax layska qor qorane in aysan wax tareynin qofkasnae uu wanaaga ku dadaalaa si hormar loogaaro.
qofkastane waa inoo ka fiiriyaa ayuu yiri” sidee waxbarasha loo heelaa sidee caafimaad loo helaa sidee ilmaha badaha kudhi manaayo looga celiyaa sidee hormar loogaaraa waa in dadka ku fikiraan ayuu yiri” malaaq deerow maalaaq yacquub.
ugu danbeeyan malaaq deerow malaaq yacquub ayaa u mahad ciliyay warbaahinta kuufur galbeed ee soomaaliya sida ay shacabka ugu shaqeeyaan. iyo sida ay runta ugu hadlaan. dhibaatooyinka haysta shacabka soomaaliyeed u soo bandhigaan.
HOOS KA DHAGEYSO WAREYSIGA OO DHAMEYSTIRAN MALAAQ DEEROW.
DHAGEYSO :MALAQ DEEROW OO BEENIYAY IN XILKA LAGA QAADAY,, was last modified: August 20th, 2015 by warsan radio
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe oo ka hadlay shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe
Dhageyso:-Waraysi Xasaasi ah Maamulka Degmada Bardaale oo La Badaley. Dowlad Goboleedka koonfur kalbeed soomaaliya..
wararka caawaawa ee warsanradio dhageysi wacan.
Dhageyso:-Wareysi+Xilabaan Ka tirsan Galmudug Asigoo oo Ka War Bixiinaayo Ceelbiyood Laqodaayey.
Dhageyso: Dad Badan U Dhinteen Oo Ka dil;aacay Degmada Berdaale ee Gobolka Bay.
KOONFUR GALBEED OO GUUL DARO MURUGO LEH KA RAACDAY SHIRKA MADASHA WADATASHIGA QARAN
Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isaga baxay Deegaanka HALGAL ee Gobolka Hiiraan